Ukuzenzekelayo ukuThengisa okuzenzekelayo kulo naliphi na ubungakanani beShishini | Martech Zone
UkuziThengisa okungafikelelekiyo kulo naliphi na ubungakanani beShishini
NgeCawa, Meyi 22, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 2, 2013 Douglas Karr
YokuThengisa ligama elinikwe kumaqonga esoftware eyilelwe amasebe entengiso kunye nemibutho yokwenza lula iinkqubo ngokwenza imisebenzi ephindaphindayo. Omnye wale misebenzi kukukwazi ukuchonga undwendwe kwindawo yakho, ukubamba ulwazi lwabo, kunye nokuphuhlisa isicwangciso sonxibelelwano esiqhubekayo kunye nabo… kufezekiswe ngezixhobo ezincinci okanye kungabikho zixhobo kusetyenziswa oomatshini abazihambelayo.
Ngokutsho Iqela laseAberdeen, iinkampani ezihambisa iinkqubo zokuthengisa ezizenzekelayo:
Unama-107% angcono okuguqula inqanaba lokuguqula.
Yiba ne-40% enkulu yesayizi yesivumelwano.
Yiba ne-20% yeqela eliphezulu lokufumana isabelo.
Zuza iipesenti ezili-17 ezichanekileyo zesimo sezulu.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukuphunyezwa kwentengiso oomatshini bokusebenza bekukho nzima kakhulu okanye kubiza kakhulu kwinkampani ephakathi ukuyiphumeza. Oku kuyatshintsha. Umthetho-kuhlobo olutsha lwesoftware ezenzekelayo yokuthengisa eyakhelwe ukuphumeza ezona nkampani zincinci, okanye zinkulu. Ngamaxabiso oko kukuthi ~ $ 500 ngenyanga (ngaphandle kwezivumelwano zexesha elide)… kukwafikeleleka ngokumangalisayo ukuphumeza esi sisombululo sibanzi.
Ukuze baphumelele namhlanje, abathengisi kufuneka baphinde bayiqwalasele indlela yabo esisiseko ukusuka nje ekuveliseni izixa zokukhokelela ekusebenzisaneni ngokubonakalayo nentengiso ukuqhuba ingeniso, utshilo uRaghu Raghavan, umseki kunye neCEO yeAct-On. Indibaniselwano yomthetho-elula kunye namandla inikezela ukuba ikhonkco lilahlekile kwimarike phakathi kwezisombululo ezingafaniyo ezinje nge-imeyile kunye newebhu kubahlalutyi amaqonga, kunye nobunzima obungaphezulu kobunzima obuphezulu obuphethe amaqonga okuzenzekelayo.
I-Software-On Software inetoni yokhetho olutyebileyo… zonke ziyafumaneka kwiqonga elinye:
Ukuthengisa nge-imeyile kunye nolawulo loluhlu kunye nemikhankaso yokuthengisa
Iifom zewebhu kunye namaphepha okufika
Umdibaniso womxholo weshishini
Ukubeka iliso kubatyeleli bewebhusayithi
I-Webinar kunye nolawulo lomsitho (ngokudityaniswa kweWebEx)
Umdibaniso weCRM (ngokudityaniswa komthungo weNtengiso)
Intengiso yemidiya yoluntu kunye nezixhobo zokukhangela
Ukujongwa kwethemba, ukwahlulahlulwa, isiqinisekiso, ukufumana amanqaku kunye nohlalutyo
Umthetho-On ikwabonelela ngomphathi wenkxaso ozinikeleyo ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo! Ngokwesiqhelo i-upsell yabanye abathengisi abazisebenzelayo. Umdibaniso oManyeneyo woMthetho kunye Iwebhu, Sexy kwaye lesforce inokubonelela ngemizamo yakho yokuthengisa ngomendo opheleleyo- ukusuka kwithemba, ukuya kwiphepha lokufika, ukuya kwidemo, ukukhulisa, ukukhokela ukuvelisa, ukuvala… ngaphandle kokuba ushiye isoftware. Yinkqubo elungileyo.
tags: Ukuphicothwa kweBranduphawu lokubekisa lwentlalo
Imixholo yesihloko se-imeyile Amagama aqala amacebo okucoca uSpam
I-SMMS: IiNkqubo zoLawulo lweMidiya yoLuntu
Meyi 23, 2011 kwi-1: 00 PM
Sawubona uDouglas, ungawuthelekisa njani umthetho-kunye neHubSpot? Ngaba sisisombululo seSAAS okanye ufuna ukuyifaka kwiserver yeWebhu yakho? Ukuba yiSAAS, kukho naziphi na iingcinga malunga nenkonzo yabathengi?
Iminqweno emihle, uJohn McTigue
Meyi 23, 2011 kwi-3: 19 PM
Oku komelele ngakumbi kuneHubspot. Andicingi ngeHubspot njengeqonga lokuzenzekelayo njengentengiso yokungena ngaphakathi. Ndingacima-kodwa andicingi ukuba i-CRM, iphulo lokudropa, njl., Ziyinxalenye yesicelo seHubspot.
Meyi 23, 2011 kwi-3: 27 PM
I-HubSpot inayo ukukhokelela ekukhuliseni (i-drip) kunye nokudibanisa i-API kunye ne-Salesforce kunye nezinye ii-CRM, ukudala iphepha kunye nokwenza ngcono, izixhobo ze-SEO (nangona zincinci), i-CMS yewebhusayithi kunye ne-blog injini edibeneyo. Oko kubonakala ngathi yindawo ebanzi yokuthengisa esisiseko kum. Baneentengiso ze-imeyile ezakhelweyo ngaphakathi.
Eyona ilungileyo, nguJohn
Meyi 23, 2011 kwi-9: 43 PM
Ndizazi zombini izixhobo; Ngokwenyani yehla kule nto uzama ukuyenza- kukugxila ikakhulu ekungeneni, emva koko i-hubspot inokulunga ukujonga, okanye ubuncinci isixhobo sabo 'simahla' sewebhu seo isixhobo; ukuba kugxilwe ekuphumeleleni okungcono kwimikhankaso ephumayo kunye / kunye nokwenza kube lula ukulawula onke amaphulo akho kunye nezixhobo ngokudibeneyo- ezinje nge-webex, salesforce.com, i-jigsaw kunye nokunye, emva koko yenza umthetho-ulunge ngakumbi. Ngokukodwa unikwe indlela ekulula ngayo ukuba umthetho-ukwazisa / ukusebenzisa kunye nokugxila kwabo ekuhanjisweni kwe-imeyile.
Meyi 27, 2011 kwi-6: 03 AM
Ukuveliswa kwesoftware okanye inkqubo yokurhweba, ndazi njani ukuba ndifumana elona xabiso liphezulu lesoftware / inkqubo.
Meyi 27, 2011 kwi-4: 34 PM
Intengiso ye-iPhone App
Juni 1, 2011 ngo-3: 57 AM
Le yenye yeebhlog ezinkulu endizifundileyo namhlanje. Indawo yakho iqulethe ulwazi oluninzi oluqinisekileyo kwaye ndiqinisekile ukuba abantu abaninzi baya kuyithanda njengam. Ndingathanda ukunika le ndawo ubungakanani obuphezulu. Qhubeka nemisebenzi elungileyo guys. Ndicinga ukuba ndiza kubuya kule ndawo rhoqo. Enkosi.